बालकविता लेखनमा बालसङ्गतको प्रभाव - रमेशचन्द्र घिमिरे
आईतबार, चैत ८, २०७७ रमेशचन्द्र घिमिरे
बालकविता लेखनमा बालसङ्गतको प्रभाव
- रमेशचन्द्र घिमिरे
बालसाहित्यका विभिन्न विधाहरूमध्ये बालकविता वा बालगीत एउटा महत्त्वपूर्ण विधा हो । बालकविता लेखनलाई ‘टेबुल वर्क’ का रूपमा भन्दा पनि ‘फिल्ड वर्क’ का रूपमा प्रयोग गर्न सकियो भने त्यो अझ बढी रोचक, प्रभावकारी, मनोवैज्ञानिक र सशक्त हुन सक्छ । कतिपय बालकविता लेखकले बालबालिकासँग घुलमिल भएर भन्दा पनि अर्ती उपदेश दिने अभिभावकका रूपमा र नैतिक सन्देश दिने गुरुका रूपमा आफूलाई उभ्याएको पाइन्छ । वास्तविक बालकविता लेख्न त उनीहरूसँग सामीप्यता गाँस्न, उनीहरूको आँत छाम्न, उनीहरूसँगै रमाउन, उनीहरूका कुरा बुझ्न तथा समग्रमा भन्दा उनीहरूसँग सङ्गत गर्न सक्नुपर्दछ । बालबालिकाको सङ्गतले उनीहरूका कुराहरू खोजेर, उनीहरूसँग सोधेर, उनीहरूसँगै भिजेर र उनीहरूलाई नै भित्रैदेखि बुझेर बालकविता लेखनमा सफलता हासिल गर्न सकिन्छ । बालकविता लेख्दा आफू पनि बालकै जस्तो बनेर कविता लेख्ने प्रेरणा प्राप्त गर्न पनि बालबालिकाको सङ्गत हुनु जरुरी छ । बालसाहित्यका सर्जकहरूसँग सिर्जनात्मक खुवी भएर मात्र हुँदैन, विषयवस्तुको ज्ञानको पनि आवश्यकता पर्दछ । कुनै पनि मानिस आफू एक्लै पूर्ण हुन सक्दैन । तसर्थ प्रौढ साहित्यकारले बालकविता लेखनमा आफ्नो विगतको अनुभवबाट प्राप्त हुने खुराकका साथै वर्तमानका बालबालिकाहरूसँग सोधेर, खोजेर, बुझेर र भिजेर पनि थप मसला प्राप्त गर्न सक्छन् भने अन्य साहित्यिक स्रष्टाका रचनाहरुको अध्ययन गरेर पनि बालकविता यसरी लेख्दा प्रभावकारी हुँदो रहेछ भनेर बुझ्ने अवसर प्राप्त गर्दछन् ।
माधवप्रसाद घिमिरे, दैवज्ञराज न्यौपाने, कृष्णप्रसाद पराजुली, रामबाबु सुवेदी, बुँद राना लगायतका थुप्रै बालसाहित्यकारहरुका कविता पढेर, बालसाहित्यानुरागी स्रष्टा तथा पाठकबाट प्राप्त प्रत्यक्ष र परोक्ष प्रेरणाबाट अनि बालबालिकासँग विभिन्न सन्दर्भमा भएका सर–सङ्गतबाट प्राप्त मेरा अनुभवले मैले पनि केही बालकविता लेख्ने प्रयासचाहिँ गरेको छु । मेरो बालकविता लेखन प्रारम्भिक चरणमै रहेकाले म आफू सिकाइकै क्रममा छु ।
बालकविता लेख्दा प्रयोग गरिने बालपात्र सकभर आफू नै भएको राम्रो हुन्छ । अभिभावकले सम्बोधन गर्ने गरी चयन गरिएको बालपात्रलाई बालकविताको पात्र बनाउँदा बालबालिका स्वयम्ले पढ्न रमाइलो मान्दैनन् । बालबालिका स्वयम्लाई पात्र बनाइएको बालकविता पढ्दा उनीहरु बल्ल रमाएर वाचन गर्न सक्छन । सम्बोधित बालपात्रको प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा सम्बोधक वाचक वा पाठक केही बढी उमेरको दाजु वा दिदी भयो भने त्यस्तो बालकविता प्रभावकारी हुन सक्छ र त्यस्तो बालकवितामा पनि बालबालिका आफै समाहित भएको अनुभूत गर्न सक्छन् । बालबालिकाले बालकविता वाचन गर्दा उनीहरु अभिभावक वा गुरु–गुरुआमा भएको सुहाउँदैन । त्यस्तै गरेर बालबोलीको प्रयोग गर्नुपर्ने कुरामा पनि स्रष्टाले ध्यान पुर्‍याउनु आवश्यक पर्दछ । बालबालिकामा हुने कल्पनाशीलता, उनीहरुले मन पराउने विषयवस्तु (जस्तैः फूल, पुतली, खेल, विद्यालय, घर आदि), उनीहरुले गर्न सक्ने अनुभव, बालोपयोगी सन्दर्भ, बालसुलभ चेतना, बालमनोविज्ञान, बालोचित कोमल भावना आादिको यथास्थानिक, स्वाभाविक र सुहाउँदा प्रसङ्ग नै बालकविताका लागि ग्राह्य हुन्छन् । बालकविता लेखनमा ध्यान पुर्‍याउनै पर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा त के हो भने बालकविता लयात्मक हुनु जरुरी छ । बालकवितामा लय छनोट गर्दा लेखकलाई लेख्न सजिलो र बालबालिकालाई गाउन सजिलो लोकलयको प्रयोग गर्नु धेरै राम्रो हुन्छ । लोकलयअन्तर्गत १२, १४ वा १६ अक्षरे सबाई, १२ अक्षरे भजन, १६ अक्षरे असारे झ्याउरे, १६ अक्षरे सेलो लगायतका लोकछन्दहरु बढी प्रयोगमा आएका छन् र ती लयहरु बालबालिकाका लागि रुचिकर पनि बन्न सकेका छन् । लघु–गुरुको गणसूत्रमा मिहिनेत गर्नुपर्ने हुनाले लेखकलाई लेख्न केही असजिलो भए पनि बालबालिकाले गाउन रमाइलो मान्ने उपजाति, अनुष्टुप्, वसन्ततिलका, भुजङ्गप्रयात् जस्ता शास्त्रीय छन्दको प्रयोग गरेर लेख्न सकियो भने त्यस्ता शास्त्रीय छन्दको प्रयोग झन् सशक्त र प्रभावकारी हुन सक्छ । आखिर जे सुकै भए पनि समग्रमा भन्नुपर्दा बालबालिकाको सङ्गत गर्न जानियो भने मात्र एउटा बालसाहित्यकारले सफल बालसाहित्यकारका रुपमा आफूलाई उभ्याउन सक्छ । बालकविता लेख्दा मानक, व्याकरणिक र शुद्ध भाषाको प्रयोगमा ध्यान दिन नसक्दा र भाषिक विचलन हुँदा बालबालिका पर्ने नकारात्मक प्रभावका बारेमा बालसाहित्यका सर्जक उत्तिकै सचेत हुनुपर्ने कुरा त झन् बिर्सनै हुँदैन । माधवप्रसाद घिमिरे, दैवज्ञराज न्यौपाने, कृष्णप्रसाद पराजुली, रामबाबु सुवेदी, बुँद राना लगायतका थुप्रै बालसाहित्यकारहरुका कविता पढेर, बालसाहित्यानुरागी स्रष्टा तथा पाठकबाट प्राप्त प्रत्यक्ष र परोक्ष प्रेरणाबाट अनि बालबालिकासँग विभिन्न सन्दर्भमा भएका सर–सङ्गतबाट प्राप्त मेरा अनुभवले मैले पनि केही बालकविता लेख्ने प्रयासचाहिँ गरेको छु । मेरो बालकविता लेखन प्रारम्भिक चरणमै रहेकाले म आफू सिकाइकै क्रममा छु । कमी–कमजोरीहरु धेरै छन् र पनि विज्ञ पाठकबाट सुझावको अपेक्षा राख्दै यसै सन्दर्भमा मेरा अनुभवहरु यस आलेखमा समेट्न् प्रयास गरेको छ् ।
१) बालबालिकाका कुराहरू खोजेर –
‘यति यति पानी गङ्गे रानी’ बाल समुदायमा प्रचलित अत्यन्त लोकप्रिय बाल खेलगीत हो । आफू केटाकेटी छँदा मैले पनि खासै नबुझी-नबुझी यस खेलमा सहभागी भएको थिएँ । तर मलाई यसका बारेमा राम्ररी बुझ्नै थियो । कक्षा १० मा पढ्दै गरेका छात्राहरूलाई ‘यति यति पानी’ का बारेमा कसलाई थाहा छ ? भनेर सोधेँ । सबिना अधिकारी नामकी छात्राले यस खेलको खेल्ने तरिका र यसमा हुने शृङ्खलालाई राम्ररी अर्थ्याइन् अनि मैले ‘यति यति पानी’ कविताको. पुनर्सिजन यसरी गरेँ -
लाज मानी किन गर्छ्यौ आनाकानी ?
खेल्यौँ हाँसी खुसी साथी भाइ माझ
२) बालबालिकाहरूसँग सोधेर –
“आँगनमा नाचगान गरिन्छ । आँगनमा भारी बिसाइन्छ । आँगनमा कोही गुच्चा खेल्छन् कोही तास खेल्छन् । आँगनमा चुम्मी खेलिन्छ, खोपी पनि खेलिन्छ । केटाकेटीले आँगनमा कपर्दी, डन्डीबियो र अरु खेल पनि खेल्छन् । जाडामा आँगनमा गुन्द्री ओच्छ्याएर घाम ताप्न पाइन्छ । बिस्कुन वा धान सुकाउनका लागि आँगनकै प्रयोग गरिन्छ । तिहारका बेलामा भैली खेल्न, रङ्गोली बनाउन र उस्तै परे भाइटीका लगाउन पनि आँगनलाई नै उपयोगमा ल्याउन सकिन्छ । आँगनमा दसैँमा खसी काटिन्छ । सानोसानो दाइँ हाल्न पनि आँगनमा नै मिल्छ । आँगनमा धान झाँट्न र भट्ट, मास ठटाउन पनि मिल्छ । गुन्द्री ओच्छ्याएर आँगनमा बसी निबुवा साँधेर खान पाउँदा कम्ती रमाइलो त हुँदैन । पुसको पहार ताप्दै आमा र हजुरआमाहरूले आँगनमा तान लगाएर गुन्द्री पनि बनाउँछन् । दसैँको बेला आँगनमै त हो नि घुर्रे पिङ र लट्ठ् पिङ हाल्ने !” आदि–आदि । मैले यसअघि पनि जाँतो, ठेकी, छपनी, लोहोरो जस्ता शीर्षकमा पनि यसरी नै उनीहरूका विचार बटुलेर कविता लेखेको थिएँ । यसै क्रममा लेखिएको चस्मा शीर्षकको बालकविता यस्तो छ –
चस्मा ला’र हिँड्ने गर्छन् मामा, काकाले
ठूलाले त यसै लाउँछन् स्यास्यानाले लाउने
३) बालबालिकालाई बुझेर
खेलछुट्टीको समय थियो । कोही भलिबल खेल्दै थिए, कोही चुङ्गीमा रमाउँदै थिए, कोहीचाहिँ फुटबलमा व्यस्त थिए तर सात कक्षा पढ्ने नानीहरू भने कक्षाकोठाभित्रै बसेर रमाइलोसँग गट्टा खेल्दै थिए । मैले उनीहरूले गट्टा खेलेको राम्ररी हेरेँ । उनीहरू पालैपालो खेल्दै थिए । तिनीहरूमध्येकी एउटी छात्रा सुकमाया वि.क.को गट्टा खेलाइबाट म प्रभावित भएँ र उनीहरूको अनुमति पाएर भिडियो खिचेँ । बेलुकी घरमा आएपछि त्यो भिडियो नियालेँ । गट्टा खेल्ने तरिका र चरणका बारेमा बुझ्दै गएँ र थप स्पष्ट हुनका लागि भोलिपल्ट सोधेँ । अनि उनीहरूको मनोभावना बुझेर फुर्सदमा यस्तो कविता तयार पारेँ –
किन घुर्की लगाउँछ्यौ
खोजी आऊ अनिता
गट्टा फिँजाई भुईंमा
खेलिन् साथी निताले
एक् टिप्पे र दुई टिप्पे
खेल्दैछु म हेर्दै जाऊ
खेल्दाखेल्दै थाकेँ म
तिम्लाई पालो दिम् कि ?
एक् छिनपछि खेल्ने हो
आँखा छली सुनिता
नबन है बाठी
झेल् नगरी खेल्न आऊ
घोडे गुफा खेलौँ है
ढ्यापु, च्यापु, घर् लिपी
गीता अनि बिनिता
मनिता छिन् जाती
भोलि फेरि जुटौँ है
गट्टा खेल्ने साथी !
४) बालबालिकाहरूसँग भिजेर
आइतबारको दिन थियो । कक्षा ९ मा पढाउनका लागि घन्टी बज्नासाथ कक्षाकोठाभित्र पसेँ । आज पढ्नुपर्ने विषयको शीर्षक बोर्डमा लेखेर विद्यार्थीहरूलाई किताब पल्टाउन निर्देशन दिँदै थिए, एक जना छात्रा उठेर मलाई एउटा चोकोफन र दुइटा मिठाई दिइन् । उनले आज मेरो जन्मदिन हो भनेर भन्न नपाउँदै मैले कुरा बुझिहालेँ किनभने कसैको जन्मदिन छ भने यसरी नै मिठाई दिने चलन छ । मैले उनलाई जन्मदिनको शुभकामना दिएँ । जन्मदिन कसरी मनाउने भन्ने बारेमा जिज्ञासा राख्दा उनले जे बताइन् मैलै त्यसलाई कवितामा उतारेर भोलि सुनाउने वाचा गरेपछि उक्त दिनको पाठ पढाएँ । उनको जन्मदिन मनाउने तरिका मलाई साह्रै चित्त बुझ्यो । उक्त कविता मैले अर्को दिन कक्षामा सुनाएँ र सोही कविता कान्तिपुर कोपिलामा प्रकाशनका लागि पनि पठाएँ । अर्को आइतबार सो कविता कोपिलामा प्रकाशित पनि भयो । कविता यस्तो थियो –
आज हाम्री साथीको जन्म दिन हो
कल्ले छेक्न सक्छ र खुसी साट्नलाई ?
बालबालिकालाई नबुझी कविता लेख्दा त्यस्तो कविता केवल कोरा नारा, खोक्रो भाषण र उपदेशले लादिएको भारी जस्तो हुन्छ भन्ने बुझेर म प्रायः बालबालिकाकै सङ्गत गरेर कविता लेख्न रमाउँछु । तर यसरी कविता लेखे पनि मैले उनीहरूको मनोभावना बुझ्ने खालको कविता रचना गर्न सकेको छैन । बालबालिकाले मेरा बालकविता पढेर अग्रज साहित्यकारका कविता पढ्दा जुन किसिमको आनन्द प्राप्त गर्न सक्छन् त्यस्तो आनन्द पाउन सकेका छैनन् भन्ने मेरो ठहर छ । अग्रज बालसाहित्यकारकै जस्तो कलात्मक, कल्पनाशील र रमाइला कविता लेख्ने प्रयासमा छु । मेरो बालकविता लेखन प्रारम्भिक चरणमै रहेकाले म आफू सिकाइकै क्रममा छु । कमी–कमजोरीहरु धेरै छन् । त्यसैले विज्ञ पाठकबाट सुझावको अपेक्षा राख्दै मेरा अनुभवहरु सँगालिएको यस संस्मरणात्मक आलेखलाई बिट मार्न चाहन्छु ।
आईतबार, चैत ८, २०७७, २१:०५:००
पोखरा र सिन्धुपाल्चोकका स्रष्टाको संयुक्त रचना वाचन
...र म अछुत भएँ - रश्मि रोदन परियार
कवि भूपी शेरचन र उनको ‘सहिदहरुको सम्झनामा’ कविता - रुपिन्द्र प्रभावी
बुधबार, चैत २५, २०७७ रमेशचन्द्र घिमिरे
कवि भूपी शेरचन नेपाली प्रगतिवादी साहित्यिक आन्दोलनका एक जुझारु कवि हुन् । जीवनका उत्तरार्धमा आफ्ना मौलिक विचारमा केही विचलन देखिए पनि समग्रमा उनको साहित्यिक यात्रा अद्यापि मननयोग्य नै मानिन्छ । पुरा पढ्नुहोस्
आईतबार, चैत २२, २०७७ रमेशचन्द्र घिमिरे
कवि ईश्वरमणि अधिकारीले गणित विषयमा विद्यावारिधि उपाधि हासिल गरेका छन् । पुरा पढ्नुहोस्
विश्व हिमोफेलिया दिवस मनाइँदै १२ मिनेट पहिले